Shaxda Arsenal Kula Ciyaari Doonto Manchester City
Arsenal waxay Sabtida la ciyaari doonaa Manchester City, semi-finalka tartanka FA Cup, waxaanay labada kooxoodba ku qasban yihiin inay guuleystaan maadaama aanay jirin lug labaad.
Gunners oo u dagaallamaysa sidii ay tartanka Europa League ee xili ciyaareedka dambe, kuna jirta kaalinta sagaalaad hase yeeshee saddex dhibcood ka dambaysa Wolves oo kaalinta lixaad ku jirta, waxa gabaabsi sii noqonaysa fursadaheeda, laakiin waxay nafta dul dhigi kartaa tartanka FA Cup.
Mikel Arteta iyo kooxdiisu waxay toddobaadkan guul weyn oo 2-1 ah kasoo gaadheen Liverpool oo ay Emirates isku haleeleen, waxaanay saddexaas dhibcood siiyeen niyad ay ku waajahaan Man City oo Is-aaragii xili ciyaareedka dib loogu bilaabay bishii June ku garaacday 3-0.
Tababaraha reer Spain waxa la filayaa inuu dib u helo Mesut Ozil oo uu kooxdiisa kusoo celiyo shan maalmood oo uu dhaawacyo ku maqnaa kaddib, inkasta oo ciyaartii Liverpool isaga oo shaaciyey inuu taam yahay haddana aan lasoo xulin.
Goolhaye Emiliano Martinez ayaa booskiisa xajisan doona oo kusoo bilaaban doona kulanka berri maadaama uu goolhayaha koowaad ee Arsenal ee Bernd Leno uu dhaawacan yahay.
David Luiz iyo Rob Holding ayuu Arteta kusoo wada bilaabay ciyaartii hore ee Liverpool, laakiin markan waxa uu tababaraha reer Spain soo celin doonaa Mustafi oo uu ku saddaxayn doono Kolasinac, halka uu labada baaloodna Cedric iyo Tierney dhigi doono, taas oo ka dhigan in shan difaac ah oo ay laba khadka dhexe caawinayaan uu ku ciyaari doono.
Ozil ayaa markii ugu horreysay muddo shan ciyaarood ah kusoo laaban doona garoomada, waxaanu khadka dhexe la wadaagi karaa Xhaka, sida ay saadaashu sheegay, laakiin afka hore ayuu culays badan isagana gelin doonaa tababare Arteta.
Aubameyang ayaa kusoo laaban doona safka hore kaddib nasashadii Is-aaragii Liverpool, waxaase kaydka uu u diri doonaa Lacazette sida uu wargeyska The Sun qoray, iyadoo ay Saka iyo Pepe boosaskooda xoraysanayaan.
Qaab-Ciyaareedka macquulka ah ee Arsenal halkan kaga bogo